Mareykanka oo weeraray Jihadi John - BBC News Somali
Mareykanka oo weeraray Jihadi John
Lahaanshaha sawirka video
Image caption Maxamed Emwazi oo loo yaqaan John Jihadi waxaa lagu arkay dhawr muuqaal oo dad qoorta looga goynayay
Xog laga helay militeriga Mareykanka ayaa sheegaya in ay aaminsan yihiin in ninka xag jirka ah ee loo yaqaan Jihadi John oo ka tirsan kooxda la baxday dowladda Islaamiga in lagu dilay weerar cirka ah oo ka dhacay dalka Suuriya.
Habeenkii Khamiista ayaa dayaarad kuwa aanay cidina wadin ee Mareykanka waxay gantaal ku ridday gaari uu saarnaa Maxamed Emwazi, kaasi oo lagu dilay isaga iyo qof kale oo aan la sheegin meel u dhaw magaalada Raqqa.
Emwazi – oo ah British ku dhashay dalka Kuwait – ayaa dhawr jeer waxa uu ka muuqday muuqaallo video ah oo lagu dilay qoortana looga gooyay weriyayaal ajnabi ah iyo shaqaale samafal.
Raiisul Wasaaraha Britain, David Cameron, ayaa sheegay in aanu hubin in weerarku ahaa mid lagu guuleystay. Waxa uu sheegay in weerarka lala wadaagay UK, kaasi oo lagu tilmaamay tallaabo is difaacid ah.